Shirqoollo ayay maleegayaan Farmaajo iyo Fahad - GMM | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha Midowga Musharixiinta Soomaaliya, ayaa Farmaajo Fahad Yaasiin ku eedeeyay in ay wadaan dhaqdhaqaaq ciidan iyo shirqoollo maleegan si ay u carqaladeeyaan hawlaha doorashooyinka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Murashaxiinta, ayaa Farmaajo ku eedeeyay in uusan weli ka quusan damacii muddo kororsiga, waxayna tilmaameen inuu doonayo in uu awoodda amniga dib u ceshado, si uu u xagal daaciyo caddaalad u helista kiiska Ikraan Tahliil, una carqaladeeyo habsami u socodka hawlaha doorashooyinka ee uu hoggaanka u hayo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta ayay ku garab istaagen in uu dardar geliyo hawlaha doorashooyinka, gacantana ku dhigo amniga dalka, waxayna uga digeen inuu gorgortan ka galo heshiiskii 27 May lagu saxiixay Caasimadda, ee loogu igmaday gacan ku haynta amniga iyo daadihinta doorashooyinka dalka.
“Wuxuu ku boorrinayaa Golaha Wadatashiga Qaran in la dedejiyo hawlaha doorashooyinka, loona fududeeyo sida ugu sahlan ee ay degdeg ugu qabsoomi karto, lana turxaan bixiyo tabashooyinka laga qabo habraaca, si dalka looga samatabixiyo hubanti la'aanta siyaasadeed iyo amni. GMM wuxuu diyaar u yahay in uu hawshaas ku gacansiiyo”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay GMM.
Waxa ay Ciidanka Qalabka Sida, uga digeen in ay siyasadda ku milmaan, waxay ugu yeereen in ay Golaha Wadatashiga Qaran ku garab istaagaan sidii dalka uga dhici lahayd doorasho, kana hortagaan cid kasta oo isku dayda in ay doorashada qalqal geliso.
“Wuxuu indhaha ku hayaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo shirqoolka ay maleegayaan Madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo taliyihii hore ee NISA, si ay u carqaladeeyaan hawlaha doorashooyinka, una abuuraan xasillooni darro iyo qalqal amni. Goluhu marna ma yeeli doono in ay taasi dhacdo, wuxuuna caddaynayaa in Farmaajo uu qaadayo masuuliyadda iyo cawaaqib xumida ka dhalata falkaas gurracan”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka.
Mucaaradku waxa ay dalbadeen in caddaalad u helista Ikraan Tahliil iyo ehelkeeda aan la hor istaagin, wuxayna ku baaqeen in hay'adaha garsoorka loo daayo kiiska. “Wuxuu xeer ilaalinta iyo Maxkamadda ciidanka ku boorrinayaa in ay caddeeyaan caqabadda hortaagan caddaaladda”. Ayaay sii raacsiiyeen.